तलब केहि गरे बढेन ? ,यो उपाय लगाउनुहोस « Channel Np
तलब केहि गरे बढेन ? ,यो उपाय लगाउनुहोस
प्रकाशित मिति : Thursday, May 23rd, 2019 at 8:38 AM
जागीरमा पदोन्नति होस्, वर्षैपिच्छे तलब बढिरहोस् भन्ने चाहना हरेक मानिसमा हुन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, कहिलेकाहीँ कयौं वर्षसम्म पनि तलब बढ्दैन । पदोन्नति पनि हुँदैन । यस्तो किन भइरहेको छ, तपाईंले यसबारे कहिल्यै विचार गर्नुभएको छ ? यसका विविध कारण हुन सक्छन् । यसमध्ये केही कारण तल दिइएका छन् :
यो भएन, त्यो भएन, यस्तो समस्या भयो, उस्तो समस्या भयो भनेर तपाईं सधैं हाकिम र अन्य सहकर्मीसँग गनगन गरिरहनुहुन्छ ? आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी र समूहका सदस्यले कुनै समस्या लिएर आउँदा सोको समाधान निकाल्न सक्नुहुन्न ? यदि यस्तो हो भने यसले पनि तपाईंको पदोन्नति र सेवा सुविधामा असर पार्न सक्छ । यो धेरैजसो शीर्ष पदमा रहेका कर्मचारीमा मिल्छ । कम्पनीले कर्मचारीलाई जस्तोसुकै समस्यासँग पनि जुध्न सक्छ, समाधान निकाल्न सक्छ भन्ने सोचेर ठूलो पदमा राखेको हुन्छ । तर, उसले अपेक्षा गरेअनुरूप समाधान निकाल्न सकेन भने पनि पदोन्नति र तलब वृद्धि रोकिन्छ । आर्थिक अभियान अनलाइनको सहयोगमा